I-spinosaurus yafunyanwa njani?
Izilwanyana kunye Nendalo Dinosaurs
by UBob Strauss
Imbali ye-Fossil yeDarsasaur enkulu kunazo zonke zehlabathi
Ukuba ubuya kubhala ibhayisikobho malunga nomlando wezinto ezindala zeDinosaur Spinosaurus , indawo yokuqala yayiza kufakwa entlango yaseYiputa, ngexesha legolide le-colonialism yase-Yurophu, ngo-1912-iminyaka emibini ngaphambi kokuqhambuka kweMfazwe Yehlabathi I iintlanga ezifana nezityalo zaseJamani azizange zithintele ukuthumela izidibanisa zabo kunye nososayensi kwiindawo ezikude, apho bafumana khona (abanye bathi bayaba) ubuncwane bezenkcubeko nezembali.
Ngethuba lokuya kwi-Bahariya yaseMpumalanga, i-fossil-hunter egama linguRichard Markgraf yafumanisa iindawo eziseleyo zenyama-edla i -roprop, kubandakanywa izakhiwo ezingabonakaliyo ezibizwa ngokuthi "i-neural spines" eziye zavela kule vertebrae ye-dinosaur. I-Markgraf yathumela amathambo eJamani, apho u- Ernst Stromer von Reichenbach ohlonitshwayo owaziwayo wabanika i-genus entsha kunye neentlobo ze- spinosaurus aegypticus (aka "i-Egyptian Spine Lizard").
Faka "i-Moroccan Spine Lizard"
Akuyinyaniso, abantu abaninzi bakholelwa, ukuba iSpinosaurus yabuyiswa kwakhona kuphela ngokufumaneka kweMarkgraf. Ngaphezulu kweeminyaka emibini ezayo, uReichenbach ufumene eyamanye ama-spinosaurus-afana namanye ama-fossils avela kwenye indawo enyakatho ye-Afrika, nangona kungekho namnye kubo babenomdla njengoko iBhahariya "yintlobo yezinto eziphilayo." Noko ke, bakwenza u-von Reichenbach ukuba atyumbe iindidi ezintsha, i- Spinosaurus maroccanus ("iMoroccan Spine Lizard"), eyahluke kwiindawo ezincinci kwi-Egypt.
Nokuba unikezwe isithuba se- Spinosaurus aegypticus , umgaqo-siseko we- S. maroccanus uhamba ngokukhawuleza. Namhlanje, abaninzi beepalthilologists bakholelwa ukuba ezi ngqungquthela kufanele zinikezelwe ngokufanelekileyo kwi-spinosaur uhlobo oluthile lweCarrorodontosaurus ("Omhlophe Omnyama") okanye ngaphezulu kakhulu, kwaye kunzima ukubiza, iSigilmassasaurus.
UDale Russell - odumiweyo ngenxa yeengcinga zakhe malunga nokuba yintoni eyayiba yiTroodon ukuba kungengenxa yokuqedwa kwe-K / T-iyaqhubeka ikholelwa ekuqinisekisweni kweS S. Maroccanus , nangona ekwahlukileyo phakathi koontanga.
Spinosaurus aegypticus, UkuShabalaliswa kweMfazwe
Iingqungquthela zangaphambili ezazisetyenziswa ngu von von Reichenbach ezakhiwa yiSpinosaurus aegypticus zafakwa emva kweMfazwe Yehlabathi I kwi-Bavarian State Collection yePaleontology, eMunich - kwaye yabhujiswa kwiBhoom yaseBrithani ekuhlaselweni kweso sixeko ngo-Ephreli 24 no-25, ngo-1944. emva kokugqibela kwimfazwe, emva kokuba iJamani ikwazi ukutshatyalaliswa kuzo zonke iinjongo kunye neenjongo.) Ngethamsanqa, njengawuphi na onobuhle be-paleontologist, uVeisichenbach washiya imifanekiso ecacileyo yeemifanekiso kunye ubuncinane neefoto ezimbini, ngaloo ndlela "uhlobo lwamafutha "ihlala ikhona ukuhlalutya.
Ziziphi iifossil zangempela zeSpinosaurus zisesekhoyo? Nantsi uluhlu olufutshane lweziqwenga eziphambili:
Imyuziyam yaseCanada yeNdalo ine-vertebra ende enesibhozo ezisixhenxe, izaliswe nge-neural arch, eyayiyimfuneko kwigama le- S . Maroccanus .
I-National Museum ye-Histoire Naturelle, e-Paris, inayo i-spinosaurus ye-intshi ye-inch-long fragment efunyenwe eAlgeria.
I-Museo di Storia Naturale di Milano, eItali, inomqhekeza omkhulu (ubuninzi obungama-intshi angama-40 intshi), izihlandlo ezisibhozo kunye nexesha laseParis.
I-National National Mines, eTunisia, apho uya kufumana iincwadana ezincinci zamazinyo kunye neengqumbo ezifunyenwe kweli lizwe.
Ngokukufutshane nekhaya, iqoqo le-paleontological ofunivesithi yaseChicago liqukethe amathambo angama-spinosaurus amabini ahlanganiswe "ngophuphu," elingama-intshi ezisixhenxe ubude.
Kutheni i-Spinosaurus yayinomkhumbi?
Ukunikezela yonke le ntetho "yohlobo lwamafosholo," iziqwenga zee-snouts kunye nama-flst crests, kulula ukulahlekelwa yinto ephawulekayo ye-Spinosaurus: iindawo eziphambili ze-sprasaurus eziphuma phezulu kwi-vertebrae yayo. Ekuqaleni, u-Ernst Stromer von Reichenbach wachaza oku njengoko wayexhasa inqwaba yamanqatha, afana ne-hump yekamela langoku.
(Ubuncinane i-dinosaur enye, i- Ouranosaurus , kukholelwa ukuba yayiyidlale le nto, efuna ukuba yenze ukuba iphile kwiindawo ezimeleyo).
Kwiminyaka yakutshanje, nangona kunjalo, ubunzima bombono kukuba i-sporsausurus ye-neural isekela inqanawa elincinci ngasemva kwe-dinosaur, kunokuba i-hump thick. Oko kwathiwa, injongo yale nqanawa ihlala ingummangaliso; kusenokuba yinto ekhethiweyo yokuziphatha ngokwesondo (oko kukuthi, amadoda eenjengezikhulu ezihamba phambili, ezona zihamba phambili ziphumelele ukusebenzisana nabesifazane), okanye mhlawumbi ziye zaguqulwa ukuze zenze i-Spinosaurus ilawula ukushisa kwayo. Ufuna ukwazi ngaphezulu? Jonga eli nqaku elincinci, Kutheni i-Spinosaurus yayinomkhumbi?
Iingqungquthela ezili-10 eziphefumlelweyo ziphefumlelwe yizilwanyana zokuqala
10 I-Dinosaurs engazange iyenze nge-19th Century
Ii-Dinosaurs ezincinci ezingama-20 kunye nezilwanyana zokuqala
I-Loud Can Are Rooveurs Roar?
UMegalodon noLebhanatan - Ngubani Owunikelayo?
I-A epheleleyo ye-Z Uluhlu lwe-Dinosaurs
I-Bear Bear kunye neCango Inkunzi - Ngubani Owunikelayo?
I-Cutest Dinosaurs ezili-10
I-Dinosaur Icokola - Iqoqo elilodwa-I-Dinosaur Humor
Iimfazwe zokuQala eziPhambi kweNkundla ezingenzeka (kwaye mhlawumbi zenzeke) Zenzeke
Ngaba Ioli Ivela KwiDinosaurs?
Iidolophu ezili-10 ezineendawo eziphezulu zokuhlaliswa kwabantu
Fumana i-Blaft Skating Blades for You
Iimpi zeNapoleonic: I-Battle of Fuentes de Oñoro
Isikhokelo sokuSichaza iMaminerali eNtsundu
Ukusetyenziswa kweePlastics ezahlukeneyo
Kuthetha ntoni ukuphikisa?
Imbali yeStymie eGoli
Ngokumalunga ne-US Presidential Oath ye-Ofisi
Kutheni Sisebenzisa ii-Euphmisms?
Yintoni uMthetho woTshintsho noTshintsho ngo-1986?
Iikhemikhali ezinobuthi kwi Cosmetics
I-Sugoi - Iimpawu ezilula zaseJapane
Ukusebenzisa i-Package kunye neWebloc Wizard (VB6)
Amy Grant iKrisimesi Umculo
Ngubani Ovuma "KuKristu Ophela?"
IRiphabhlikhi yaseFedical America (1823-1840)
I-Beltane IsiGodlokazi seNkwenkwekazi yaseBelane
I-Princess kunye neFrog (2009) - Igalari yezithombe zeBafana
I-Calorimetry: Ukulinganisa Ukutshintsha kweHlabathi
Ukukhohlisa okanye Ukuphatha Amazwi Ukuzisa i-Giggles and Chills
Ngaba Unokuthiwa Abafazi Abafazi Abama-5?
I-Chemistry Izibhalo Ukuqala ngeW, X, Y, Z
I-Causas de deportación frecuentes en Estados Unidos
Intetho ka-Amelia Earhart: Uphando lwe-Archaeological